Ungena njani umjelo ovaliweyo kwiTelegram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungena njani umjelo ovaliweyo kwiTelegram?
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 1619
Isicelo seTelegram sikhululekile vala kwaye uvale amaqela okanye amajelo Ezichasene nemigaqo-nkqubo yezokhuseleko esekwe yinethiwekhi yemiyalezo ekhawulezileyo. Ngaphandle koku, kukho indlela yokungena kwisitishi esivaliweyo kwiTelegram kwaye nantsi into esiza kukucacisela yona.
Ngaba wakha wazibuza ukuba kutheni iTelegram ivimba amajelo? Inyaniso kukuba zininzi izizathu zokuba kutheni isicelo singenza ezi ntlobo zezigqibo, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuba ungafikelela kwisitishi esivaliweyo kwaye indlela yokwenza oko ilula noko.
Iimfuno zokungena kwisitishi esivaliweyo kwiTelegram
Ukuba ufuna ukufikelela kwisitishi esivaliwe yiTelegram Kubalulekile ukuba uthathele ingqalelo iimfuno ezithile ezisisiseko ezifunwa sisicelo. Amanyathelo okuqala aya kubhaliswa kwiqonga, oko kukuthi, ukuba neakhawunti esebenzayo kwiTelegram.
Kwakhona Kubalulekile ukuba nesicelo seTelegram Inguqulelo 3.0 okanye ngaphezulu efakwe kwiselfowuni, nangona le mfuno inganyanzelekanga. Ungafikelela kwiqonga kwi-Smartphone yakho.
Amanyathelo okungena kwisitishi esivaliweyo
Kakuhle kakhulu. Sifikelele koko sinomdla wokwenene kwaye sifunda indlela yokufikelela kwisitishi esivaliwe yiTelegram. Isicelo sinikezela ngezinye iindlela ezimbini eyahlukileyo ukufezekisa le njongo.
Ngenisa ijelo elivaliweyo kwisicelo
Ngaba unayo isicelo seTelegram esikhutshiwe kwiselfowuni yakho? Emva koko unokufikelela ngokulula kwisitishi esivaliweyo. Ukwenza oku kuya kufuneka ulandele la manyathelo alula:
cofa kwi icon yeglasi ezukisayo ngasekunene kwesikrini
Chwetheza kwibar yokukhangela igama "@Nicegram_bot" kwaye ucofe kwiqhosha "START"
Zininzi iindlela onokukhetha kuzo. Khetha "Ukungena kweNicegram"
Qinisekisa ukuba ungaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala kwaye ivumela usetyenziso ukubonisa umxholo onokuba novakalelo.
Ngoku yintoni elandelayo? Into ebaluleke kakhulu iza
Buyela kwingxoxo kwaye ucinezele phezulu kwesikrini apho ithi "Nicegram Bot"
Cofa kumachaphaza amathathu kwaye ukhethe "Yeka bot"
Buyela Umva kwaye uyiqale kwakhona
Nciphisa, susa usetyenziso kwimisebenzi emininzi kunye yivule kwakhona
Abasebenzisi baya kuba nakho ukufumana isisombululo kwingxaki yeendlela ezivaliweyo kwiwebhu. Kuqala kufuneka ungene kule dilesi ilandelayo: https://my.nicegram.app/
Kuya kufuneka ungene. Ungayenza ngokucofa iqhosha "Ngena ngeTelegram"
Iqonga liya kukubuza qinisekisa ukungena.
Ngoku lungisa useto. Emva koko cofa ku "umgadi"Kwaye ungene ngaphandle kukhetho lwe" Phuma "(ungayifumana kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini)
Ilungile. Ngoku unokufikelela kumajelo eTelegram awayekade ethintelwe ngaphambili.
Ukulandela ezi ngcebiso zilula kwaye zikhawulezayo Ungafikelela kwisitishi esivaliwe yiTelegram kwaye wonwabele umxholo ekwabelwana ngawo kwakhona.
1 Iimfuno zokungena kwisitishi esivaliweyo kwiTelegram
2 Amanyathelo okungena kwisitishi esivaliweyo
3 Ngenisa ijelo elivaliweyo kwisicelo
4 Ukufikelela kwiwebhu
Uyenza njani iakhawunti kwi-twitter?
Facebook Ndiyicima njani ngokusisigxina?